17 Nzukọ ụmụ Izrel dum wee si n’ala ịkpa Sin+ pụọ, na-aga site n’otu ebe ruo ebe ọzọ, bụ́ ebe dị iche iche ha gara dị ka Jehova nyere n’iwu,+ ha wee maa ụlọikwuu na Refidim.+ Ma mmiri ha ga-aṅụ adịghị. 2 Ndị Izrel wee sesa Mozis okwu,+ sị: “Nye anyị mmiri ka anyị ṅụọ.” Ma Mozis sịrị ha: “Gịnị mere unu ji na-esesa m okwu? Gịnị mere unu ji na-ele Jehova ule?”+ 3 Agụụ mmiri wee na-agụ ndị Izrel, ha wee na-atamu ntamu megide Mozis, na-asị: “Gịnị mere i ji kpọpụta anyị n’Ijipt iji mee ka agụụ mmiri gụgbuo anyị na ụmụ anyị na anụ ụlọ anyị?”+ 4 N’ikpeazụ, Mozis tikuru Jehova, sị: “Gịnị ka m ga-eme ndị a? Obere oge ugbu a ha ga-atụ m nkume!”+ 5 Jehova wee sị Mozis: “Gafere n’ihu ha,+ kpọrọ ụfọdụ n’ime ndị okenye Izrel, werekwa mkpara gị nke i tiri n’Osimiri Naịl.+ Jiri ya n’aka gawa. 6 Lee! M ga-eguzo n’ihu gị n’ebe ahụ n’oké nkume dị na Horeb. Ị ga-akụ oké nkume ahụ mkpara, mmiri ga-agbapụta na ya, ndị a ga-aṅụkwa ya.”+ Mozis wee mee otú ahụ n’ihu ndị okenye Izrel. 7 O wee kpọọ ebe ahụ Masa+ nakwa Meriba,+ n’ihi esemokwu ụmụ Izrel sere nakwa n’ihi ule ha lere Jehova,+ na-asị: “Jehova ọ̀ nọ n’etiti anyị ka ọ̀ bụ na ọ nọghị?”+ 8 Ndị Amalek+ wee bịa buso Izrel agha na Refidim.+ 9 Mozis wee gwa Jọshụa, sị:+ “Họtara anyị ndị ikom ma gaa+ buso ndị Amalek agha. Echi, m ga-eji mkpara nke ezi Chineke guzo n’elu ugwu.”+ 10 Jọshụa wee mee nnọọ dị ka Mozis gwara ya,+ iji buso ndị Amalek agha; Mozis na Erọn na Họọ+ wee gbagoo n’elu ugwu ahụ. 11 O wee ruo na ozugbo Mozis weliri aka ya, ụmụ Izrel ana-emeri;+ ma ozugbo o weturu aka ya, ndị Amalek ana-emeri. 12 Mgbe aka Mozis nyịwara ya arọ, ha buuru nkume debe n’okpuru ya, o wee nọrọ ọdụ n’elu ya; Erọn na Họọ wee jide aka ya abụọ, otu onye n’otu akụkụ, onye nke ọzọ n’akụkụ nke ọzọ, aka ya wee kwụrụ otu ebe ruo mgbe anyanwụ dara. 13 N’ihi ya, Jọshụa ji ihu mma agha merie ndị Amalek na ndị so ha.+ 14 Jehova wee sị Mozis: “Dee ihe a n’akwụkwọ+ ka ọ bụrụ ihe ncheta, kwuokwa ya ná ntị Jọshụa, ‘M ga-ehichapụ ihe niile a pụrụ iji na-echeta Amalek n’okpuru eluigwe.’”+ 15 Mozis wee wuo ebe ịchụàjà ma kpọọ ya Jehova-nisaị, 16 wee sị: “N’ihi na e nwere aka na-emegide ocheeze+ Jaa,+ Jehova ga-ebuso Amalek agha site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ.”+